INorthern WI, Chequamegon Bay.
Leli khaya elinefenisha ephelele endaweni yokuhlala yase-Ashland lifaka umtapo wolwazi, umpheme omkhulu wangaphambili kanye nompheme one-grill. Indawo yokupaka evuliwe/evaliwe iyatholakala. I-Historical Main Street, Chequamegon Bay, izimakethe zokudla kanye nokufinyelela kumzila konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba eliseduze.
Leli gumbi lokulala eli-4, ikhaya lokugezela eli-2 (eligcwele) lihlanganisa amagumbi amabili ngalinye linombhede wendlovukazi, igumbi elilodwa elinombhede ophindwe kabili, kanye negumbi elinombhede wamawele wonke asezingeni lesi-2. Ngaphezu kwalokho, singakwazi ukumisa ikamelo lokulala elizimele esitezi esikhulu esinombhede ophindwe kabili futhi sinemibhede egcwele etholakalayo komunye nomunye wosofa ababili egumbini lokuhlala. Okunye okutholakalayo yi-Pack-n-play.
Ikhishi lihlome ngokugcwele, okuhlanganisa isihlalo esiphezulu, ukusetshenziswa kwegrill yangaphandle (ngenkathi yasentwasahlobo, ihlobo nekwindla) umtapo wezincwadi, kanye noxhaxha lwamavidiyo nemidlalo. Siphinde sinikeze amasango omntwana angasethwa endaweni ngokucela kwakho.
Indlu iseduze nephaseji ye-Tri-County yokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili, futhi ngaphakathi kwebanga lokuhamba elilula ukuya eLake Superior ukufinyelela.
Sinikeza ukufinyelela kokufika kwamahora angu-24 ngesistimu yebhokisi lokukhiya. Izivakashi zizokwaziswa ngekhodi yokungenela kanye nemininingwane yethu yokuxhumana ngaphambi kokufika kwazo. Kukhona ulwazi ekhaya mayelana nezindawo ezikhangayo kanye nezinsiza. Sihlala kude futhi sihlala sitholakala ngocingo noma ngombhalo futhi sizokujabulela ukuphakamisa imisebenzi, izindawo zokudla nezikhombisi-ndlela.
Sinikeza ukufinyelela kokufika kwamahora angu-24 ngesistimu yebhokisi lokukhiya. Izivakashi zizokwaziswa ngekhodi yokungenela kanye nemininingwane yethu yokuxhumana ngaphambi kokuf…